အခြားသူများထံမှလေးစားမှုကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်ပုံ - သတင်း
အဓိက / သတင်း
ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်သင့်လျော်မှုကိုခံစားရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလေးစားရန်လိုအပ်သည်။ သူတစ်ပါးထံမှလေးစားမှုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်၊ အစပြုလုပ်ဆောင်ရန်၊ ကြင်နာရန်၊ အားကိုးရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားသူများအတွက်တောင်းပန်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်၊
ကောင်းသောသူတစ် ဦး ထွက်စားရန်မည်သို့မည်ပုံ
သင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လေးစားမှုမရှိလျှင်အခြားသူကသင့်အားလေးစားရန်မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လက်ခံပါ၊ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင်၏ပထမ ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးသင်သူသို့မဟုတ်သူမမဟုတ်လျှင်၎င်းကိုအဆုံးသတ်ပါ။ ဒုတိယအကောင်းဆုံးအဘို့အမနေပါနဲ့။
တစ် ဦး pushover မနေပါနဲ့
စကားပြောပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးတွင်သင်ပါ ၀ င်ပါစေ။ သင်၏နေ့လည်ခင်းအစီအစဉ်များကိုအခြားသူများအားခွင့်မပြုပါနှင့်။ သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုရှာဖွေပါ၊ သင့်ခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါ၊ ငြင်းဆိုရန်သင်ယူပါ၊ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစွဲကိုင်ပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းကိုသူငယ်ချင်းအများကြီးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသင့်ကိုအမြဲတမ်းမှန်ကန်စေမှာပါ။
ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားဖို့သင်ကြားခံခဲ့ရတယ်။ ငါ့ကိုဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေဖို့ကြိုးစားရတာမပျော်ဘူးဆိုတာကိုမသိခင်အထိငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးစပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ ငါလိုချင်တာကိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါနောက်ဆုံးတော့ပျော်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကအရေးအကြီးဆုံးပဲ! ခက်ခဲသောလမ်းများသည်လှပသောနေရာများသို့ ဦး တည်သွားလေ့ရှိသည်။
လေးစားမှုကိုရရှိရန်လူတိုင်းကသင့်အကြောင်းအရာရာတိုင်းကိုသဘောကျမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအောင်မြင်မှုကဂိမ်းတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီး၊ ဂိမ်းတိုင်းတွင်ပြိုင်ဘက်များရှိသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သင်၏ပန်းတိုင်များနှင့်အိပ်မက်များကိုအမြဲတမ်းအမြဲထားပါ။
အမြဲတမ်းအိပ်ပါ၊ ပြီးတော့နံနက်အချိန်မှာသင်အဲဒီလိုခံစားမိရင်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။ သို့သော်ပထမနှင့်သင်နှင့်လက်ခံသူကိုမည်သို့ထိခိုက်မည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကဲဖြတ်ပါ။ နောက်ထပ်အကြံပေးချက်တစ်ခုကသင်၏ခံစားချက်ကို၎င်းကိုထုတ်ယူရန်ချရေးခြင်းဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာဒါကသင်အနည်းငယ်သက်သာတာဒါမှမဟုတ်ကိတ်မုန့်ကိုခံစားရဖို့လိုအပ်တာပဲ။
သင်၏ဘဝကဏ္ aspect တိုင်း၌ပန်းတိုင်များထားရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင်သည်ထိုသူတို့ကိုရောက်ရှိကြသောအခါရုံထိုင်ခြင်းနှင့်သင်၏အောင်မြင်မှုအရေးမပါဘူးတူသောပြုမူကြပါဘူး။ အခိုက်အတန့်၌ပျော်မွေ့ပါ။ သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်မည်သူမဆိုအကြွေးယူခွင့်မပြုပါနှင့်။ သင်ရရှိခဲ့သည်
သင်ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်း၊ အားနည်းချက်များကိုသင်၏အားသာချက်များကိုဖြစ်စေပါ။ သင်၏ဘ ၀ သည်မမေ့နိုင်သောစွန့်စားမှုများနှင့်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသင့်သည်။
avatar နောက်ဆုံး airbender ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပဟေizိများ
သင်လုပ်နေတာကိုသင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်လျှင်ကြိုးစားပါ၊ ဘာမှမလုပ်ပါနှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းရှာပါလိမ့်မယ်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ်!
Qdoba သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သော်လည်း Crave-A-Bowl ကတိပေးထားသည်
ပြောင်းပြန် Snobbery ပြProbleနာတစ်ခုလား
တစ် ဦး '' အရူးမိန်းကလေး '' ဖြစ်ခြင်း၏ကာကွယ်ရေးအတွက်
'ယောက်ျားလေးများနှင့်ညသန်းခေါင်စကားပြောခြင်း' - Call of Duty ဗီဒီယိုမှ Scouse ကောင်လေးများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်
သငျသညျအသစ်သောဆက်ဆံရေးအတွက်အခါသင် FWB နှင့်အတူအိမ်ထောင်ဖက်နေနိုင်သလား? လေးနက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
ဦးဆောင်တက္ကသိုလ်ကြီးကျောင်းသားများကိုကရေးသား Sensation ပုံပြင်များ, ဖက်ရှင်, တွေကတော့, ခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, အားကစားဝေဖန်
MI အမြင့်ကိုမှတ်မိသလား။ ဤတွင်အလယ်တန်းကျောင်းသူလျှိုများယခုမှတက်ဘာတွေလုပ်နေလဲ
သင့်လိင်အင်္ဂါနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမလိုသောအရာ ၁၈ ခု
Emory သည်အမေရိကရှိ ၁၀ ခုမြောက်ကွဲပြားခြားနားသောကောလိပ်ဖြစ်သည်
Copyright 2021| prognoz-pogoda.com | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ